Caamsaa 11 Yaadannoo Boqonnaa Qulqulluu Yaareed – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
May 19, 2020 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Guyya kanattis fakkeenya Suraafeel kan ta’e abbaan faaruu lammii Itiyoophiyaa kan ta’e Qulqulluu Yaareed boqateera. Qulqulluun kunis gosa firoota Abbaa Geedeewooni dha. Innis Manneen Kiristaanota Itiyoophiyaa Keessatti Ijaaraman kan dursitu luba Mana Kiristaanaa Aksuumi dha. Manni Kiristaanaa Kunis Amantaan abbaa kabajaa kan ta’e Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan keessatti lallabamee fi Waaqa kan deesse Giiftii keenya Qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan kan kabajamtee dha. Abbaa Geedeewoonis Qulqulluu Yaareed baruumsa barsiisuu yeroo eegalutti baroota baay’eedhaaf qabachuus ta’ee qo’achuu dadhabe. Guyyaa tokko barsiisaan isaa isatti aaree rukutee dhukkubse. Qulqulluun Yaaredis baqatee urufatti, baay’ina gadda isaa irraa kan ka’e gaaddisa mukaa jala taa’ee Yeroo raammon muka irra baatus arge. Raammon sunis walakkaa mukichaa geessee kufaa turte. Yeroo baay’ee erga kufteen booda dhiphina guddaadhaan mukicha irra baate. Qulqulluun Yaareedis ciminaa raammoo sanaa erga argeen booda gara barsiisaa isaa Afuurawaatti deebi’ee, yaa abbaa koo dhiifama naaf godhitii waan feete nagodhi jedheeni; barsiisaan isaas ofitti isa simate.
Kana boodaa boo’icha baay’eedhaan gara Waaqayyootti kadhannaan lapheen isaa ifeefi yeroo gabaabduu keessatti kitaabolee Kakuu Duraa fi Kakuu Haaraa xummuree aangoo daaqonummaanis muudame. Yeroo sanatti sagalee gadi qabaadhaani malee akka har’aa kanatti sagalee guddaadhan faarfannan Mahaaleetii hin jiru ture. Waaqayyos yaadannoo isaaf dhabbuu feenaan /Gannata Edoom/ keessaa sinbirroota sadi ergeefi. Isaanis afaan namaatin itti dubbatanii gara Iyyaruusaalem ishee samiitti isaan waliin ol isa baasan. Achittis luboonni 24 kan ittiin galateeffatan Mahaaleetii isaanii barate. Gara qalbii isaa gara lafaattis yeroo deebi’etti Mana Kiristaanaa qarqara Aksumitti argamtu takkas sa’atii saditti seenee sagalee guddaadhan, “Hallee Luyaa Abbaaf, Hallee Luyaa Ilmaaf Hallee Luyaa Afuura Qulqulluuf, arjaan Tsiyoon samii uume. Lammaaffas akkamitti akka ishee ijaaru akkaataa ijaarsa dunkaanaa museetti agarsiise, isa barsiisee,” jedhe. Galata kanas Ariyaam jedhee moggaase. Sagalee isaa yeroo dhagahanitti mootichi, mootittiin, Phaaphaasiin luboota hunda waliin, qondaaltotni mootummaa fi uummanni gara isaatti fiigichaan dhufanii isa dhaggeeffachaa oolan.
Sana boodaa waggaa hanga waggaatti, akkaataa kutaa baraatin, gannaa fi bona, birraa fi arfaasaa waqtii soomaa fi ayyaanotaa, sanbattan, akkasumas ayyaanota Ergamootaa, Raajotaa fi Duuka Bu’ootaa, Toloota fi Wareegamtootaa, Danaagiliif akka ta’u taasisee yeedaloowwan sadaniin hojjate. Yeedaloowwan sadan kunis Gi’iizii, Izilii fi Araaraayii dha. Dubbiin namootaa, iyyi sinbirrootaa, bineeldotaa fi bineensootaa yeedaloowwan sadan kana keessaa hin bahu.
Guyyaa tokkos Qulqulluu Yaareed mootii Gabramsaqal fuul-dura dhaabbatee osoo faarfatu, mootichi sagalee yeedaloo Yaareed osoo dhaggeeffatuu lapheen isaa faaruudhaan waan fudhatameef ulee sibilaa isaatiin miila Qulqulluu Yaareditti gadi dhaabbate. Miilaa isaa keessaayis dhiigni fi bishaan ni dhangalaa’e. Qulqulluu Yaareedis Maahileet hanga xummurutti itti hin dhagahamne ture. Mootichis kana arginaan ni rifate; ulee isaas miila Qulqulluu Yaared irraa buqqise; gatii dhiiga keetif waan barbaadde na gaafadhu jedheen; Qulqulluun Yaaredis akka nan hin dhowwanneef naaf kakadhu jedheen. Mootichi yeroo kakateefitti gara Kawaalaa deemee akkan Monokkosuuf naaf eeyyami jedheen. Mootichi erga dhagaheen booda aangawoota isaa waliin baay’ee gadde, akka hin dhorkineef kakuu sana sodaatee osuma gadduu gaggeesse. Sana booda Qulqulluun Yaareed gara Mana Kiristaanaatti seenun Taabota Tsiyoon fuuldura dhaabbatee, “gonkaa kan taate, kan galateeffamte, ulfina ol’aanaa kan gofatte, baha ifaa, gulantaa jireenyaa kan taate” galata jedhu hanga xummuraatti yeroo dubbatu ciqilee tokko lafa irra ol ka’e.
Kana booda gara kaaba biyyattiitti deemuun soomaf kadhaannaan murtaa’uun foon isaa baay’ee dadhabsiisuun jiraachuun; Qabsuura isaas achitti goolabe. Maqaa isaa nama waamuuf, yaadannoo isaa nama kabajuuf Waaqayyoon waadaa kenneefi. Kana booda nagaadhan boqote.
Galanni Waaqayyoof haa ta’u, kadhannaa Qulqulluu Yaareedin dhiifama nuuf haa taasisu. Eebbi isaa bara baraan nu waliin haa ta’u. Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2020-05-19 12:49:552020-05-19 12:49:58Caamsaa 11 Yaadannoo Boqonnaa Qulqulluu Yaareed
“Seera Kiristoos raawwadhaa!” Gal 6:2 Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf angafa ta’ee du’aa ka’eera”...